Mofon’aina – ALATSINAINY 12 MARTSA 2018 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – ALATSINAINY 12 MARTSA 2018
12 martsa 2018
1 Efraima manodidina Ahy amin’ ny lainga, ary ny taranak’ Isiraely amin’ ny fitaka; Ary Joda mbola mikarenjy tsy manatona an’ Andriamanitra, dia ny Iray Masina sy Mahatoky.2 Efraima homan-drivotra sady manenjika ny rivotra avy any atsinanana, mandritra ny andro dia ataony betsaka ny lainga sy ny fandozana; Manao fanekena amin’ ny Asyriana izy, ary diloilo no entina ho any Egypta.3 Manana ady amin’ i Joda koa Jehovah Ary tsy maintsy mamaly an’ i Jakoba araka ny alehany, Ka hatsingeriny aminy ny nataony.4 Fony mbola tany am-bohoka dia nihazona ny ombelahin-tongotry ny rahalahiny izy, ary rehefa lehibe izy, dia nitolona tamin’ Andriamanitra;5 Eny, nitolona tamin’ Ilay Anjely izy ka nahery; Nitomany izy sady nifona taminy; Nahita azy tao Betela Izy, ary tao no niresahany tamintsika;6 Jehovah, Andriamanitry ny maro, Jehovah no hahatsiarovana Azy.7 Koa miverena amin’ Andriamanitrao ianao; Tandremo ny famindrampo sy ny rariny. Ary miandrasa an’ Andriamanitrao mandrakariva.
HOSEA 12 :1-7
Hatramin’ny fotoana nialan’ny olona voalohany tamin’ny fankatoavana ny Tenin’ Andriamanitra dia mitady izay hanarenana azy ny Tompo , Mpamonjy Izy . Koa mivoitra eto ny fanarenan’ny Tompo ny lavo.
1-Miresaka sy miteny ny Tompo (and 4-5)
Zava-dehibe miavaka ho antsika kristiana ny manana Andriamanitra afaka miresaka sy miteny amintsika. Ny Baiboly no hanehoany ny famonjeny sy ny Teniny amintsika. Izy no manatona aloha mba hifikirantsika Aminy . Izy Ilay efa tia antsika taloha ary tia antsika hatramin’ny farany. Henoy àry ny ny antson’ny Tompo mitaona antsika fony Izy teto an-tany ka mivavaha mba ho setrin’izany . Ny vavaka no nampianariny hiraisantsika Aminy indray. Resaka hatao Aminy tokoa izany.
2- Mitady ny fomba rehetra Izy (and 6-7)
Efa fantany tsara ny momba antsika tsirairay tahaka ny hitanisany ny nataon’i Efraima sy Joda . Tsy misy azontsika hialana eo anatrehany eo anatrehany , mampitandrina antsika hanao ny tsara ary mampiandry antsika ho vavolombelony ny Tompo . Miharihary izany fa ny fombany rehetra no hanangonany antsika ho eo anatrehany. Porofo izany fa tsy mahafoy na mandao antsika ny Tompo. Ataony izay mahafaly sy mahasoa antsika ka aoka isika hihaino sy hankato ny Teniny mba hamirapiratra ny fahasoavany sy ny voninahiny .
Voafetra ve ny fotoana na ny toerana hihaonantsika amin’ny Tompo mba hiresahana Aminy ?
Mofon'aina - ZOMA 09…